U-Ayanda Ncwane uthi wayenephupho lokuba nguMiss SA | News24
LAST UPDATED: 2018-06-22, 10:43
U-Ayanda Ncwane uthi wayenephupho lokuba nguMiss SA
Johannesburg - Unkosikazi wesihlabani somculo wowokholo esingasekho emhlabeni uSifiso Ncwane, u-Ayanda Ncwane, uthi wayefuna ukuba ngunobuhle futhi enephupho lokuba nguMiss South Africa.
"Nganginephupho lokuba nguMiss South Africa ngemuva kokudlula emhlabeni kukababa wami," kusho u-Ayanda engxoxweni ayenayo ohlelweni luka-Anele Mdoda, iReal Talk with Anele kamuva nje.
U-Ayanda uthe iphupho lafika ngemuva kwesikhashana kushone ubaba wakhe, umndeni ungasakwazi ukuba ubaqhubeze esikoleni.
"Ngangibona ukuthi ukuwina kuMiss South Africa kukunikeza amathuba amaningi, amantombazane ayewina imali kanti ngangibona ukuthi leyo mali ngingakwazi ukuyisebenzisa ukuqhuba izifundo zami," elandisa.
U-Ayanda wabe esengenela uMiss Durban kanye neminye imincintiswano yonobuhle kodwa akazange esaqhubeka nayo. Nakuba engazange aqhubeke nokungenela eyonobuhle, uthi ukuba ngunobuhle kwaqinisekisa into ugogo wakhe ayehlezi eyisho ngendlela abukeka ngayo.
"Ukubukeka kahle enye yezinto engakhula ngifundiswa yona. Ngiyazi abanye abantu babuka indlela obukeka ngayo uma uzazisa bese bekwehlulela ngayo," esho.
U-Ayanda uthi uyaqhubeka nokufundisa labo ahlezi enabo ngokubaluleka kokubukeka kahle.
U-Ayanda wafinyelela kuMiss SA teen ngo-2002 wafika eGoli ngalowo nyaka kodwa waphonsa ithawula kweyonobuhle ngemuva kokungadluleli phambili.
- Iphephabhuku iDrum